Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka ka waday Xukuumada ayaa sheegay inay ka laabteen – idalenews.com
Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka ka waday Xukuumada ayaa sheegay inay ka laabteen
Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka ka waday Xukuumada ayaa sheegay inay ka laabteen, kadib markii ay u cuntami weysay qaabka wax loo waday ee la doonayay in Xukuumada lagu rido.
Prof. Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ahaa mudanayaashii wax ka saxiixay mooshinka oo shalay ka qeyb galay kulan looga soo horjeeday mooshinka Xukuumada oo xildhibaano boqol gaaraya ku yeesheen Muqdisho ayaa ka hadlay sababta ku kaliftay inuu ka laabto.
“Wadada kaliya ee mooshinga lagu geeyay waxay aheyd lopin la waday, nin laga dhaadhiciyay in xukuumada dhaliil mudan tahay, nin wax gocanayay iyo kuwa diidanaa, nin walba meesha bugtaa asigee bal baleysa, ma jirin fikrado ama dad is weydiiyay waxa mooshinka lagu geeyay oo la is dhahay adiga maxaa kaa haleysan adiga maxaa ka careysiiyay”ayuu yiri Prof, Dhalxa.
Prof, Dhalxa ayaa sidoo kale sheegay inay ka laabteen mooshinkaas, kadib markii shacabka Soomaaliye ay u arkeen inay wax duminayaan sida uu yiri.
Xildhibaanada mooshinka waday ayaa waxaa ka mid Maxamed Cabdi Yuusuf, Xildhibaan Sooyaan, Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo kuwa kale oo lagu arkay madashii shalay ka dhacday qadada ee looga soo horjeeday mooshinka ka dhanka ah Xukuumada.
Dhinaca kale Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo ka hadlay kulankii shalay ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan dib loogu laaban, lana dumin Xukuumada, isagoo ka dalbaday mudanayaasha in wasiir kasta la xisaabtamaan, bedelkii ay xukuumada oo dhan ay dumin lahaayeen.
Labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa waxaa Muqdisho ka socday shirar gaar gaar ah oo lagu kala fur furayay xildhibaanada mooshinka ka waday xukuumada, kuwaasoo gaarayay in ka badan boqol xildhibaan, inkastoo haatan la sheegayo in tiradaas la soo yareeyo, waxaana war farxad leh oo qalbiga u qaboojinaya u yahay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo todobaadkii la soo dhaafay xaalka ku xumaa.
Maalinta berri ayaa qorshuhu yahay in Xukuumada ay hortagto Baarlamaanka, kadib markii gudoonka baarlamaanka uu sheegay inuu horyaalo mooshin ka dhan ah Xukuumada kaasoo ah kalsooni kala noqosho.
Wasiirka gaashaandhiga soomaaliya ee la kulmay dhigiisa sudan(sawiro)
Xildhibaanada weli dibada ku maqan oo loogu goodiyey iney xilkooda weyn doonaan haddii aysan degdeg u soo xeroon